Samsung Galaxy S wuxuu qariyaa awood garaaf leh oo cajiib ah | Androidsis
Caadi ahaan marka aynu nidhaahno astaamaha farsamo ee taleefanku leeyahay, kuwa ugu muhiimsan ayaa badanaa la yidhaa, sida processor-ka, xawaarehiisa, xaddiga xusuusta, awoodda kamaradda, ... Waxaa ka mid ah astaamahan, waxa inta badan u dhawaaqa ama xisaabta ku dar marka aad is barbar dhigayso waa xawaaraha processor-ka oo caadi ahaan waxaan u qaadaneynaa in processor-ka xawaaraha badan uu ka wanaagsan yahay midka xawaaraha yar. Hadalkani markasta maahan kiiska sidoo kale wuxuu saameeyaa canaasiirta kale ee ku hareeraysan processor-ka sida unuga farsameeya sawirada, taas oo noqon laheyd wax lamid ah kaarka sawirada ee kombiyuutarada desktop-ka.
Intaas waxaa sii dheer, processor-yadu dhammaantood waxay ka imaan karaan isla saldhig, tusaale ahaan ARM Cortex-A8, laakiin waxay leeyihiin waxqabad gebi ahaanba ka duwan markii ay soo saareen shirkado kala duwan.
Iyadoo la bilaabay cusub Samsung Galaxy S Hal shay ayaa la iska indhatiray markii la ogaaday, wuxuu siinayaa muhiimad dheeri ah tan markii hore la siiyay.
Processor-ku waa midka maareeya dhammaan xisaabinta lagama maarmaanka u ah inuu ku shaqeeyo terminal, kumbuyuutar, mashiin ama waxkastoo kale, waa wadnaha iyo maskaxda. Midkaan processor-ka ah waxaa lagu daray caawiyayaal si ay u maareeyaan qayb ka mid ah shaqadan iyo in processor-ku uu la macaamilayo kaliya waxa muhiimka ah. Mid ka mid ah kaaliyeyaashan aasaasiga ah ayaa ah midka maareeya sawirada. Falanqaynta sawirada maanta waa shaqo xoog leh oo haddii tan lagu sameeyo qayb kale oo ka mid ah qalabka oo aan ahayn processor-ka, waxaa loo daayay inay si raaxo leh uga shaqeyso howlaha kale ee maaraynta.
Markii Samsung Galaxy S Waxay ahayd wax iska cad in la bixiyo faahfaahin aad u muhiim ah taasna waa in processor Samsung uu weheliyo caawiye hawlaha farshaxanka garaafka oo nacas ka dhigaya taleefannada kale ee la midka ah, sida Nexus One ama Muhiimadda Motorola.
Markaa waxaan idinkaga tagayaa xidhiidh la leh magaca terminal-ka, nooca processor-ka ugu weyn, processor-ka garaafka iyo tirada saddexagalka ilbiriqsi kasta oo ay awood u leedahay inay diiwaangeliso ama ka shaqeyso.
Motorola Droid /ool: TI OMAP3430 oo leh PowerVR SGX530 = 7 milyan (?) Saddexagallool / ilbiriqsi
Nexus One: Qualcomm QSD8 × 50 oo leh Adreno 200 = 22 milyan oo saddexagal / ilbiriqsi ah
iPhone 3G S: Cortex-A8 (600 MHz) oo leh PowerVR SGX535 = 28 milyan oo saddexagal / ilbiriqsi ah
Samsung Galaxy S: S5PC110 leh PowerVR SGX540 = 90 milyan oo saddexagal / ilbiriqsi ah
Sida aad u aragto, awoodda tani waa mid cajiib ah Samsung Galaxy S ku reebaysa xafaayadaha Motorola Milestone, Nexus One iyo iPhone laftiisa.
Kuwa doonaya isbarbardhigga aaladda sida aadka ah u adeegsaneysa processor-ka noocaan ah sida qalabka kombiyuutarrada, faalo ka bixi in PS3 ay awood u leedahay inay ciyaarto 275 milyan oo saddexagal ilbiriqsi iyo Xbox 360 500 milyan saddexagal ilbiriqsi. Inkasta oo Samsung uu dhakhso badan yahay, haddana wali wuu ka fog yahay awoodda qalabka wax lagu xiro.
Hadda oo aad ka sii jeceshahay Samsung Galaxy S?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy S wuxuu qarinayaa awooda sawirada cajiibka ah
Hagaag, waxay siisaa ixtiraam, laakiin kaliya ma ahan "ceyriin" lambarka laakiin waa sumadda: haddii qofku tixgeliyo in waxqabadka dhabta ah ee PowerVR SGX530 (in kastoo ay u muuqato inaanay taasi ahayn) oo kor u qaadaya tallaabada muhiimka ah ayaa ah LABA mid rakibay N1, ka fikir waxa kani sameyn karo, bufffff.
Ku jawaab Eimdal
Inkasta oo Samsung uu dhakhso badan yahay, haddana wali wuu ka fog yahay awoodda qalabkaas.
iyadoo lagu xisaabtamayo in ps3-ta aad tusaale ahaan u dhaqaajineyso 275m saddexagal ilbiriqsi kasta .. iyadoo lagu xallinayo 1920 × 1080
iyo in cunugani 90m ku dhaqaaqayo xalka ugu sarreeya WVGA 800 × 480
Wga, uma maleynayo in faraqa la arki karo hadii awooda si wanaagsan loo adeegsado.La mid maaha in la arko 275 milyan polygons oo ku socda 40 ″ shaashad marka loo eego 4 ″ mid.
runti waxay horey u haysatay ku filan ... wax kale ayaa ah inay si wanaagsan uga faa'iideystaan
Waa hagaag, waa wacdaro, laakiin ma hayaan ikhtiyaar kale oo ay kor ugu qaadaan sumcadda dadka isticmaala Android ay uga tageen ka tagitaankii ugu horreeyay ee Galaxy, aniga oo iyaga ka mid ah ... waa inay wax ka bartaan noocyo kale oo sidan ah ... in la iiga iibsado oo lagu daray Samsung oo waqtigan xaadirka ah waxaan weli ku jiraa saddex iyo toban, gaar ahaan markaan arko in tartanku uusan ka curyaamin.
Miisaanku sidoo kale ma leeyahay Cortex A8?
OMAP 3430 oo taageera ARMv7 tilmaanta la dejinayo iyo ARM Cortex A-8 CPU
Waxaan u maleynayaa inay tahay koox aad u weyn, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku ogaado Venezuela, gaar ahaan magaalooyinka Coro iyo Punto Fijo, oo dukaamada lagu iibiyo, aad ayaan ula dhacsanahay waxa laga sheegayo macluumaadka oo ka fiican iphone.
Jawaab Dario Loyo